Budata PES 2021 LITE maka Windows
Budata PES 2021 LITE
Free Budata maka Windows (41.54 GB)
Budata PES 2021 LITE,
PES 2021 Lite dị maka PC! Ọ bụrụ nị na-achọ egwuregwu bọọlụ nefu, eFootball PES 2021 Lite bụ ndụmọdụ anyị. PES 2021 Lite PC pụtara maka ndị na-atụ anya egwuregwu bọọlụ PES nefu! Egwuregwu bọọlụ eFootball PES 2021 Lite, nke edebere dịka FIFA na PC, consoles na mobile, dị ugbu a maka nbudata na Steam. Iji kpọọ PES 2021 nefu, pịa na bọtịnụ PES 2021 Lite Download dị nelu.
PES 2021 LITE na-enye ohere enweghị njedebe na njirimara niile nke ọnọdụ myClub. Na MyClub, ị ga-ewulite otu nrọ gị site na iwe ndị egwuregwu na ndị njikwa dabara na ụdị egwuregwu gị. Gbanwee teas gi na ndi nebube gi ma obu tinye aka na ndi Ochie na ndi ozo di egwu iji rite uru na asọmpi a.MicClub na-enyekwa ohere Iconic Moment Series, ụdị ọkpụkpọ ọhụụ dị ike etinyere na PES nafọ a.
eFootball 2022 (PES 2022) bụ egwuregwu ịgba bọl nefu na Windows 10 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS na ngwaọrụ gam akporo. Dochie egwuregwu bọọlụ efu nke Konami...
Ndị egwuregwu a na-enweta oge echefu echefu site na ọrụ nke ọgbara ọhụrụ na nke gara aga, ha na-enyekwa gị ohere ịbịanye ọdịiche dị ike nke ndị na-apụta. Tinye ụdị egwu ọkpụkpọ abụọ a nke ọma na ndị otu gị ma chịkwaa asọmpi ahụ!PES 2021 LITE na-abịa na ọnọdụ Matchday, ọnọdụ PvP asọmpi ebe ị sonyere na mmemme dị iche iche sitere na egwuregwu bọọlụ ụwa na asọmpi ndị ama ama. Dị egwuregwu bụ egwuregwu asọmpi esports, ụlọ eFootball, nke na-akwado ndị egwuregwu niile ọkwa.
Tụkwasị na nke a, PES 2021 LITE gụnyere Mpaghara Obodo na Ọzụzụ nke na-enye gị ohere ịkwanye ikike gị na kọmpụta ahụ. Ọnọdụ Dezie tinyekwara, na-enye gị ikike ịhazi ma mepụta ọnyá, akara na aha otu. Ọnọdụ Dezie na-enyekwa gị ohere ibubata data nke ndị ọrụ ndị ọzọ mepụtara ma nweta ụdị aghụghọ dị iche iche.
Hazie ndị otu gị ma banye nọhịa nụdị! PES 2021 LITE,Ọ na-akwado mmemme eFootball Points na nso nso a. Ihe EFootball bụ ego nke Mmemme Points EFootball. Enwere ike inweta isi ihe nọtụtụ ụzọ, gụnyere igwu egwuregwu na ikiri asọmpi eFootball.
Mgbe ị nwetachara ihe, ịnwere ike iji ha maka ihe dị iche iche na egwuregwu na ego. I nwekwara ike irite ihe eFootball site na isonye na oge 2020-21 nke EFootball. E mere ndokwa ịmalite na December.
Enwere ike iji ụfọdụ ego ị nwere ike nweta ihe eFootball iji mee ka otu gị sikwuo ike, yabụ kpachara anya isonyere eFootball. PES 2021 LITE nwekwara ọtụtụ akwụkwọ ikikere site naka ndị ọrụ gọọmentị Konami FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United na Arsenal. Nke a,Otu klọb ọ bụla anyị na ya na-eme egwuregwu, nke a na-egwugharị na egwuregwu na-elebara anya na nkọwa zuru ezu, gụnyekwara ámá egwuregwu ha.
PES 2021 Moddị egwuregwu dị egwu
Ntanetị ịntanetị (ejedebeghị na asọmpi pụrụ iche)
Dezie Mode (Steam na PS4 naanị)
PES 2021 Ndị otu egwuregwu na-egwu egwu
Nime otu egwuregwu enwere ike igwu egwu na FC Barcelona, ​​FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Mpaghara egwuregwu na ọnụ. Otherdị ndị ọzọ niile na - enye gị ohere ịhọrọ otu klọb dịka ụdị egwuregwu ahụ zuru ezu. Enwere ike ịfefe data MyClub netiti PES 2021 na nke PES 2021 LITE zuru ezu. Ndị na-egwu egwu na nke free na nke PES 2021 zuru ezu. na otu sava ahụ, nke pụtara na mba Biko rịba ama na ụfọdụ ụdị, gụnyere Master League, dị naanị na ụdị zuru ezu nke egwuregwu ahụ. clubsfọdụ klọb anaghị egwu nụdị ụfọdụ na PES 2021 LITE Ọ bụghị ụdị asọmpi eFootball niile ka a ga-egwu na PES 2021 LIT. Nihi mmetụta na-aga nihu nkeOVID-19 countriesfọdụ mba nwere ike itinye mgbanwe ikpeazụ na ụfọdụ ndokwa asọmpi. Nihi ya,All nkọwa asọmpi ga-agbanwe na-enweghị ọkwa.
PES 2021 LITE Ụdịdị
Nha faịlụ: 41.54 GB
Kacha ọhụrụ na: 25-01-2022